Ngosipụta Led, Ihe ịrịba ama nke akara, akara ngosi ntanetị - Yonwaytech
Shenzhen Yonwaytech Co., Limited bụ onye na-emepụta ihe ngosi ọkụ nke dabeere na Shenzhen PRC.
Ngwaahịa gụnyere Ihuenyo nke N'èzí, Ngosipụta nke ime ụlọ, Warara Pixel Pitch HD Ikanam ihuenyo, Ikanam ihuenyo maka usoro mgbazinye na ngosipụta ihu n'èzí.
Anyị kwenyere na nghazi ndị ahịa, Yonwaytech na-etinye aka mgbe niile n'inye ọrụ dị oke mma site na ọrụ anyị.
All Na Otu Retail nkwụnye & ebre Ikanam Poster
Easy Operation nkwụnye na ebre usoro ahazi na, ọ dịghị PC chọrọ, ọzọ na-eri na-azọpụta na-adaba adaba. Super ìhè arọ na ebughibu ahazi na pikselụ 1.8mm / 2.0mm /2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm na 80 "obosara 640mm × elu 1920mm.
Stadium Perimeta ikanam Display
Nnukwu ibu dị arọ, ọrụ dị mfe na mkpọchi ngwa ngwa na njikọta maka ntinye ma ọ bụ ntinye. Polymer soft led modul mkpuchi na elu mma owu kabinet n'elu mkpuchi iji gbochie nkuku mmerụ n'oge egwuregwu ihe. Kabinet Magnesium alloy na ezigbo okpomọkụ dissip na ike Ọdịdị. Ihe ngosi IP65 na 3840hz na-enye ume ọhụrụ dị mma maka ama egwuregwu n'egwuregwu na ndekọ vidiyo.
Mkparịta ụka na-eme mkparịta ụka na-egwu egwu.
Ihe ngosipụta nke okpukpu ala nwere ọgụgụ isi, ejikọtara ya na ngwa mmekọrịta mmekọrịta ngwa ngwa ICc n'ime 0.02 millisecond. Ọdịdị siri ike ma sie ike, na-ebunye tọn 2 tọn n'ezie kwa mita mita. IP65 na-enweghị mmiri, enweghị ntụ, mgbochi mmachi na ọkọ. A na-eji ya eme ihe na discos, pubs, T-stage, concerts, and drama. ihe omume yana maka nrụnye nrụnye. Ọ dị mma maka iji oge dị mkpirikpi mee ihe ngosi, ihe ngosi ụgbọ ala, ihe ngosi ejiji ma ọ bụ ihe ngosi TV.
Dị iche iche nke Ikanam Module Display
Mgbapụta P2.5, DIP P10 P16, Ime Mgbanwe Mgbanwe. Module a pụrụ ịdabere na ya maka ime ụlọ na n'èzí, ọtụtụ nhọrọ pixel pitch.
STADIUM ARENA egwuregwu PIM PIM IKPU ikanam
Onye ntukwasi obi gi na ndi na emeputa ihe.
7x24 Ọrụ Online & Nkwado
7 × 24 hour ntabi anya, nzaghachi ngwa ngwa, nkwuputa oru efu, mmeputa mmeghachi omume mmeputa, usoro ntinye aka nke oma, ntinye ngwa ngwa.
Ogologo Ogologo Na Uche Ezi Uche
Anyị na-edebe ọnụahịa nwere ezi uche na ntụkwasị obi nwere ntụkwasị obi. Achụla àjà n'àgwà, anyị na-eji akara ihe dị elu aga. Anyị na Natiosnstar, Kinglight, MarcoBIock, Meanwell na-enwe mmekọrịta siri ike iji mesie ngwaahịa anyị ike iji teknụzụ njedebe dị elu na-eduga n'ahịa ahụ.
13+ Afọ Ahụmahụ na Ikanam Display
Ndị otu anyị siri ike nwere ikike magburu onwe ya na imepụta & n'ichepụta ihe na igwe elektrọnik. Anyị ji ntụkwasị obi nke onye ahịa anyị ọ bụla kpọrọ ihe ma mee ka echiche ha bụrụ eziokwu. 13+ afọ ahụmahụ na-edu ngosi, anyị na-emepụta na mbupụ a ntụkwasị obi gị aka.
Wide Range Of ikanam Display Product Nhọrọ
Anyị na-arụpụta ngosipụta nke ọkụ ọkụ, ime ụlọ na n'èzí, mgbazinye, akara pixel dị warara, ngwa na ahịa DOOH, ihe ngosi, mmemme nkebi, ọgbakọ, ụlọ oriri na ọ hospitalụ TVụ, ụlọ ọrụ TV, egwu, ụka na ihe ndị ọzọ. Emebere ahaziri ọrụ ngosi gosipụtara na YONWAYTECH
Jighi ezi njikwa site anyị Ikanam Screen
Site na mmụọ nke iguzosi ike n'ezi ihe, nkwanye ùgwù, ịdị mma na ọmịiko, Yonwaytech na-ewulite ma na-enwe ntụkwasị obi miri emi na ndị ahịa anyị, ndị na-ere ahịa, na ndị otu anyị. Anyị na-etinye aka na ịnye ọrụ dị elu site na ọrụ anyị na ndị ahịa anyị niile na mpaghara 6, anyị ga-anọgide na-eto eto iji na-ejere gị ozi nke ọma.
Kedu ihe nyocha IP? Gịnị ka ọ pụtara na-ada ngosi?
Ihe ngosi ọ bụla gosiri na ndị mmadụ mara na ngosipụta n'èzí ga-enwerịrị ezigbo ọkwa IP iji hụ na ọ dị mma. R&D engineer nke YONWAYTECH Ikanam ngosi ugbu a nanị idozi ihe ọmụma nke Ikanam ngosi waterproof n'ihi na ị. N'ozuzu, ọkwa nchebe nke ihuenyo ngosi Ikanam bụ IP XY. N'ihi na ...
Gịnị bụ ihe dị iche na ikanam ngosi, LCD, Projector Ma DLP?
Ikanam bụ "Light Emitting Diode", nke kacha nta unit bụ 8.5 inch, nwere ike pixel mmezi na unit modul mgbanwe, Ikanam ndụ oge karịa 100,000 awa. DLP bụ “Digital Light Procession” nha gbasara 50inch ~ 100inch ， oge ndụ gbasara elekere 8000. kwesịrị N'ogbe nnọchi ma ọ bụrụ na projecting bọlbụ na panel ...
Otu esi ahọrọ ihu ihu ma ọ bụ mmezi azụ maka ngosipụta gị.
Usoro mmezi nke ihe ngosi gosipụtara na-ekewa n'ime mmezi n'ihu na ndozi-azụ. A na-eji ndozi azụ eji eme ihe maka ikanam nke mgbidi mpụta, a ghaghị imepụta ya n'akụkụ akụkụ ọzọ ka mmadụ wee nwee ike ịrụzi ma rụzie ya site n'azụ ihuenyo ...